On indawo enkulu Russia ungathola njalo endaweni eyaziwa hhayi wonke umuntu izakhamuzi zakhona, kodwa ngesikhathi esifanayo esiyingqayizivele, ezithakazelisayo futhi emuhle. Enye yalezi izingxenye emangalisayo bemvelo kuyinto namathe eside (Krasnodar esifundeni) - ingxenye Yeisk nhlonhlo esasihlukanisa Gulf laseTaganrog oLwandle Azov.
Long eluka ehlanganisa isihlabathi neziqhumane ka mollusk - ifa ezingokwemvelo kwendawo, ukwakheka esiyingqayizivele, libhekene Dynamics eziphakeme ezazihlobene izinguquko zaphakade endaweni ngaphansi isenzo umoya wave-cut imihlola. Phakathi nekhulu leminyaka eledlule ubude namathe safinyelela 17 km. Khona-ke wawela ngenxa ukususwa limestone ukuze kwakhiwe le Tsimlyansk Reservoir futhi washouts eminingi futhi manje simi mayelana 9.5 km.
Ububanzi ewumdweshu incipha ngokushelela kusukela kumakhilomitha ambalwa kusukela ekuqaleni kuze kube amashumi amaningana amamitha ekupheleni. Kos liphuma ngaphezu kogu lolwandle e-1-1.5 m, futhi emathafeni yayo kwakheka amachibi ezincane angenasawoti. Ngaphansi kwesithombe senqaba iCape kuyinto edolobhaneni Cossack ukuthi wanika le ndawo igama lesibili - Dolzhanka noma Dolzhanskaya Amathe.
Long ezahlukene inhlanganisela eyinqaba landscape zasolwandle, asemaqeleni kanye ihlathi layo zigaba, ukujula ezihlukahlukene yezimila nezilwane ezihlukahlukene.
Nature ngomusa uye wanikeza coast Azov kukhona sezulu ikakhulukazi omnene zasolwandle, ngokuchichima ukushisa nokukhanya kwelanga, ulwandle, okuyinto lifudumeza up ngokushesha sibonga ukujula engajulile. Esikhathini wendawo esipholile sezulu yezwekazi, ngisho ukushisa eqinile Kulula ngokwanele, futhi izimpawu abuhlungu acclimatization akuyona sihambisane nanoma yimiphi izivakashi athe uma efika lapha, noma lapho bebuyela emakhaya.
Amazinga ulwandle okunethezekayo ebhukuda kusukela maphakathi no-May kuze kube u ekuqaleni kuka-October, futhi emoyeni kule sizini lolwandle esifudumeza kuze kufinyelele 25-30 ° C .. Inzika ngokuyinhloko ebusika kanye entwasahlobo, izimvula zasehlobo ezingavamile. Amabili nemibi izimo zezulu - umoya onamandla yokuntuleka umthunzi - khansela nomunye ngaphandle: ukushisa kwehlobo esiyitholayo hhayi okungaka, futhi ukunyakaza okukhulu emoyeni kubonakala ohelezayo.
A ndawo enkulukazi ngasesinqeni se-namathe eyayenziwe ithatha watshala zikaphayini yehlathi eliminyene, okuyinto eyayihlala onogwaja, izimpungushe kanye izingulube zasendle. Lokhu boron - ipharadesi amakhowe pickers. Lapha ukuqoqa amakhowe, ibhotela amakhowe kanye amakhowe. Ezindaweni lapho emasimini ihlathi isondela kakhulu ogwini, amaholide ukwazi ukufihla izithunzi aphunyuke phambi kwamehlo ilanga.
Izimila namathe wehlukile kakhulu - ungakwazi ukuhlangabezana sonwele waseCanada poplar amahlozi komthamariske, ulwandle lalesi sihlahla, zasendle rose uyabukeka emehlweni ngesikhathi izimbali. Ngesikhathi esifanayo, asikho ngokuchichima eziqhakazayo njalo esivela zokungcebeleka we Black Sea coast, okuyinto kuphakamisa i exacerbation izifo nomzimba.
Izinyoni eziningi, ikakhulu ngama-gull cormorants khetha esiqhingini sabo olwenzeka endaweni e ekupheleni ezilulazayo namathe.
Dolzhanskaya Amathe kusala ebhishi eyodwa enkulu kakhulu, okuyinto ugeza ngakolunye uhlangothi eGulf of yaseTaganrog, ngakolunye - oLwandle Azov. Amathe Long izivakashi ngokuyinhloko amabhishi zawo ezimangalisayo, ugcwele amagobolondo amancane, njengoba yayinjalo ngokuphelele futhi ziyahlukahluka ngobukhulu, ukuma nombala wazo. Izivakashi ebekelwa injabulo ukubhukuda emanzini ahlanzekile ecacile futhi tan enhle. Kuyinto engenakwenzeka ukubhukuda kuphela kakhulu ekupheleni namathe - lapho amanzi ezimbili ukuhlangabezana, uqalane whirlpools namagagasi akuyona inkinga njalo ubuhle, ngisho i umbhukudi abanolwazi.
Ogwini ngeke sijabulise abalandeli yokuchitha isizungu asebenzayo, kanye ezolile kulinganiswa umndeni iholide. Kukhona izindawo lapho ulwandle kujule khona, amamitha amahlanu nje kusuka ogwini kuya phansi engakutholi ke. Futhi kukhona emithambekeni mnene futhi engajulile lolwandle endaweni nge phansi sandy - is iphupho imibhangqwana nezingane ezincane. Cishe njalo, ungakwazi ukugcina into isimanga: kulolu hlangothi ulwandle scythe abushelelezi onokuthula, futhi ngakolunye umoya howled namagagasi.
Ngcono phezu namathe Long
Isimo sezulu ogwini loLwandle Azov neqhaza ekwelapheni izifo zesikhumba, zokuphefumula kanye uhlelo senhliziyo nemithambo yegazi. ukugeza enempilo kakhulu emanzini olwandle ahlanzekile, ecebile izakhi mkhondo, bethamele ilanga ne inani elincane emisebeni ultraviolet kanye nomswakama ongaphakeme. Beaches futhi zinika impilo izivakashi zalo sibonga Shell rock futhi isihlabathi equkethe namaminerali. Ungakhohlwa mayelana nemiphumela ezuzisayo phezu komzimba oludakayo ionized ulwandle emoyeni, ayegcwele amafektri oluyingozi futhi ngephunga izimbali elimnandi kanye namakhambi.
Kunemibandela phezu namathe nasodakeni - ogwini lwasenyakatho-emachibini usawoti nasemanzini agelezayo amachweba amanga udaka banezimfanelo izakhiwo ezibalulekile kakhulu kwezokwelapha.
Long Amathe: Phumula
Iholide lapha kuyoba nesikhathi esimnandi futhi yahlala ikhunjulwa imikhakha ehlukene yabantu. A ezihlukahlukene ongakhetha yokuhlala angakwazi ukwanelisa ngazo zombili olindele kakhulu futhi izivakashi linesizotha kakhulu. Amathe kokubili ukhululekile ukuzilibazisa isikhungo nazo zonke Izinsiza kanye nasezingeni eliphezulu of service futhi isabelomali amahhotela ekilasini umnotho, ehlobo Cottages amatende, kanye nendawo ukuya eholidini zasendle e etendeni emakamu. Izivakashi eziningi ukuqasha yokuhlala e Art. Dolzhanskaya, Long scythe wavakashela kubo kuphela ngenjongo iholidi beach. Leli dolobhana aqashiwe amakamelo amahhotela, apholile futhi amakamelo ezizimele, kukhona emakethe, izitolo, amathilomu, ekhemisi kanye ATM.
Ngenxa izimo ukuthi mahle windsurfing futhi ikhayithi ukuntweza phezu kwamagagasi, eluka eside ayedumile resort sokuzilibazisa asebenzayo. Ngezinye ithiphu yayo ukuzilibazisa "Serfpriyut" ulinde bonke abafisa ukuchitha iholide, ujabulela fun nezemidlalo okuthakazelisayo.
Ezokuzijabulisa: Long Amathe
Dolzhanskaya emzaneni umema holidaymakers uMuseum we Cossack kuyindlela yokuphila, lapho ungakwazi ukujoyina ngamasiko asendulo. Kubathandi ezokuvakasha zamasiko edolobhaneni uhlela ihlele ukuthi emzini Yeisk, lapho kukhona umlando Museum zendawo, aquarium dolphinarium, kanye echibini Khan edolobheni-inqaba Azov futhi settlement kweGrisi yasendulo Tanais.
Amkhafulele umkhakha athuthukile kabanzi imisebenzi amanzi: catamarans ukusebenza ukuqashwa, Scooters, parachutes amanzi, "banana" eqhweni amanzi. Njalo elibamba imincintiswano ku windsurfing neminye imikhosi ehlukahlukene.
I namathe eside phambili ngezibuyekezo nezithombe
Izivakashi abaye bavakashela leli dolobhana, uqaphele izimo ezikahle sezulu, amanani aphansi, uma iqhathaniswa nezinye izindawo zokungcebeleka ethandwa, ikakhulukazi oLwandle Olumnyama, akukho isikhathi futhi abantu abaningi ogwini, indawo enhle emvelweni ngenxa ukungabi khona izindawo zezimboni, ubuhle isetshenzwe Nature Reserve, intombi nemvelo. Found phakathi amaholide kanye nalabo akhononda yokuntuleka ukuzijabulisa nengqalasizinda resort, kanye udoti eshiywa yizivakashi, abangaphucukile.
Izithombe ezithathwe phezu namathe, nekhazimulayo. Amanzi kobuso Sea Azov kanye Gulf laseTaganrog imibala ehlukahlukene "ukuthungwa", futhi kwelanga wendawo kuhlaba umxhwele.
Cishe wonke umuntu ukuthi wake endaweni efana Long Amathe, uhlela buya lapha.
Ukucula nemithombo Anapa: incazelo kanye nokubuyekeza
Shah sika esigodlweni - indlu engavamile e-Odessa
Izikhangibavakashi e Yaroslavl: kuphi ukuya?
"Yulmart": Izibuyekezo Retailers ezinkulu
Bebetto - uma bekhona labo bayakwazisa ukusebenza, zokuphepha nenduduzo!
Incazelo kanye esifakiwe "Chevrolet Tahoe" ngonyaka ka-2014 imodeli
I ovulekile DBF-ifayela: ikhambi elula